clash of clan hack - MYSTERY ZILLION
i needaclash of Clan hack
I don't think application can hack COC.
Although you can play with some tips to get more achievements,you can't hack with applications. Most of apps that tell you "Blah Blah Game Hack" are malwares.
Only if you can hack their server
Android game တွေအတွက် hacking apk လေး လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။ fake မဟုတ်ပါ ။ malware မဟုတ်ပါ ။ game တော်တော်များများအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အင်တာနက်မလိုပဲ ဆော့ရတဲ့ game တွေပေါ့။ ဥပမာ subway suffer တို. Temple Run တို. ပေါ့။ အသုံးပြုပုံကလည်း လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် phone ကို root ဖြည်ထားဖို.တော့လိုတယ်။
၁ ။ game hacker app ကို run
၂ ။ ကိုယ် hack ချင်တဲ့ game ကို ဖွင့်
၃ ။ ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ တန်ဘိုး တစ်ခုခုကို မှတ်သားပြီး game hacker app နဲ. update လုပ်။
game တိုင်းနဲ.တော့ အဆင်မပြေပါဘူး။
COC (Clash of Clans ) လို game မျိုးကတော့ လုပ်လို.ရမယ် မထင်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ setting , datas , information တွေအားလုံးက server မှာသိမ်းတာ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ သိမ်းတာမှ မဟုတ်တာ။ ဆော့ရင် အင်တာနက်လိုတယ် မဟုတ်လား ? အဲ့တာ server ဆီကို ကိုယ့်ရဲ. status တွေပို.ဖို.လေ။ ဂိမ်းကို စဖွင့်လိုက်တာနဲ. အင်တာနက်ကနေ. ကိုယ့် setting တွေ status တွေကို သွားယူတာ ။ ပြီးတော့မှ game app က ရလာတဲ့ information တွေ status တွေအတိုင်း render လုပ်ပြီးပြတာ ။ဒါပေမယ့် COC လို game မျိုးက ဘာမှ data usage မတက်ဘူးလေ ။ server နဲ. များသောအားဖြင့်က ဒီ status တွေကို လှမ်းပို.တဲ့ အခါလောက်ပဲ အင်တာနက်ကိုသုံးတာ။ အဲ့တော့ ကို @septemberboy7 ပြောသလိုပဲ သူတို. server ကို hack မှ ပဲ hacking ဆိုတာ ဖြစ်မြောက်မှာပါ။